ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူ သွေးတိုးလျှင်၊ သွေးပေါင်ကျလျှင် . . . – Healthy Life Journal
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူ သွေးတိုးလျှင်၊ သွေးပေါင်ကျလျှင် . . .
မေး။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ဘယ်လောက်များပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ဘယ်လောက်များသလဲဆိုရင် ၃၀ – ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိရှိပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါကို ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ရင် သွေးတိုးရောဂါကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆီးချိုကိုနိုင်အောင် မထိန်းရင်တော့ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်မယ်။ ကျောက်ကပ်ထိရင်တော့ သွေးတိုးကဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုကို ထိန်းထားနိုင်ရုံနဲ့တော့ သွေးတိုးကို ကာကွယ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သွေးတိုးကလည်း မိဘမျိုးရိုးကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါပဲဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ဘာသာဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဆီးချိုကလည်း မိဘမျိုးရိုးကြောင့်ရော နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ (Lifestyle) ကြောင့်ပါ ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုကို ထိန်းထားနိုင်တဲ့အတွက် ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးတိုးရောဂါကိုတော့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါသည် ၁၀ဝ မှာ ၅၉ ရာခိုင်နှုန်းက မျိုးရိုးကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ရင်တော့ အဲဒီနှစ်ခုကယှဉ်တွဲပြီး ဖြစ်တတ်ပေမယ့် ကာကွယ်လို့တော့ မရနိုင်ပါဘူး။
မေး။ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ သွေးတိုးရောဂါတွဲဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဘယ်လို ရောဂါဝေဒနာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။ ဆီးချိုရောဂါကိုယ်တိုင်က လေဖြတ်နိုင်ခြေသိပ်များပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါကလည်း လေဖြတ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ ဆီးချိုကလည်း နှလုံးကိုထိတယ်၊ သွေးတိုးကလည်း နှလုံးကိုထိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီရောဂါနှစ်ခုတွဲနေရင် လေဖြတ်ဖို့လည်းအရမ်းလွယ်သလို၊ နှလုံးရောဂါကိုလည်း ပိုပြီးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ကိုလည်း ပိုပြီးပျက်စီးစေပါတယ်။ မျက်လုံးကိုလည်း ထိပါတယ်။ ရောဂါတစ်ခုချင်းကိုယ်တိုင်က အဲဒီအချက်လေးချက်ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် ရောဂါနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင် ပိုပြီးတော့ဖြစ်ဖို့လွယ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါနှစ်ခုကြောင့် လေမဖြတ်အောင်၊ မျက်စိမထိအောင်၊ နှလုံးနဲ့ကျောက်ကပ်မထိအောင် အထူးဂရုပြု ကာကွယ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
မေး။ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ သွေးတိုးရောဂါတွဲဖြစ်ရင် ဘယ်လို ကုသမှုခံယူရပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။ ဆီးချိုရောဂါအတွက် ဆီးချိုဆေးကို မှန်မှန်သောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါအတွက်လည်း သွေးတိုးကျဆေးကို မှန်မှန်သောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါမဟုတ်တဲ့ အဲဒီရောဂါနှစ်ခုကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ ထိန်းလို့ရပါတယ်။ အချိုများလွန်းတာ၊ အဆီအအိမ့်များလွန်းတာ၊ အငံများလွန်းတာတွေကို ရှောင်ရပါမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေများများသောက်ပါ။ အသီးအရွက်များများစားပါ။ တက်ကြွတဲ့ လူနေမှုပုံစံ ဖြစ်အောင်နေပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုက ရောဂါနှစ်ခုလုံးကို ပိုဆိုးဝါးစေတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချပေးဖို့ လိုပါတယ်။
မေး။ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ သွေးတိုးရောဂါတွဲဖြစ်နေရင် ဘယ်လို အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်အတွက်ကတော့ ချိုလွန်း၊ ငံလွန်း၊ အဆီအအိမ့်များလွန်းတာရှောင်ပါ။ အသီးအရွက်၊ ငါးအစရှိတာတွေ စားပေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ဆေးက သောက်ရတာများပါတယ်။ ဆီးချိုသမားသွေးတိုးရင် အနည်းဆုံး ဆေးနှစ်မျိုး-သုံးမျိုးသုံးရပါတယ်။ ဆီးချိုသမား နှလုံးရောဂါဖြစ်ရင် သွေးကြောက တစ်နေရာလေးပဲပိတ်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြင်လိုက်ကြီးကျဉ်းလာပြီး ပိတ်တတ်ပါတယ်။ ဆီးချိုသမားနှလုံးသွေးကြောကျဉ်းလို့ ှStentထည့်ရင် ဆရာဝန်တွေက ဆီးချိုကိုနိုင်အောင် ထိန်းဖို့ပြောရပါတယ်။ အက်စပရင်ဆေးကို မှန်မှန်သောက်ဖို့ပြောရပါတယ်။ ချဲ့လိုက်တဲ့စတန့်က ပြန်ပိတ်သွားနိုင်လို့ပါ။
မေး။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သွေးပေါင်ကျတဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။ အပေါ်သွေးဖိအား ၉၀၊ အောက်သွေးဖိအား ၆၀ အောက်ကို သွေးပေါင်ကျတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် သွေးပေါင်ကျသွားရင် ရှော့ခ် (Shock)ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှော့ခ်ရတာက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၁) သွေးထဲမှာ Volumeနည်းသွားရင် ရှော့ခ်ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆီးချိုသွေးချိုသမား ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ရင် Volumeနည်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဆီးချိုသမားက အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်တယ်၊ သွေးတွေ အန်တယ်ဆိုရင်လည်း သွေးပေါင်ကျသွားပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေဆိုရင် Volumeပြန်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ ဝမ်းသွားရင် ဓာတ်ဆားရည်သောက်ပေးရပါတယ်။ Drip ပြန်ချိတ်ပေးရတယ်။ သွေးထွက်များရင် သွေးပြန်သွင်းပေးရတယ်။ အဲဒါကို Hypovolumic Shockလို့ခေါ်ပါတယ်။
(၂) ဆီးချိုသမားသွေးပေါင်ကျရင် ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်က နှလုံးကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ နှလုံးက ကောင်းကောင်း ညှစ်ထုတ်နိုင်စွမ်းမရှိလို့ ဖြစ်ရတာပါ။ ဒါကို Cardiogenic Shock လို့ ခေါ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဆီးချိုသမားတွေက နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နှလုံးကထိတာများလို့ နှလုံးရဲ့ညှစ်ထုတ်တဲ့ Pump Actionက မကောင်းတော့ပါဘူး။ ဒီလိုလူမျိုးတွေ သွေးပေါင်ကျရင် ချက်ချင်း ECG ရိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ နှလုံးကြောင့် ဖြစ်မှန်းသေချာရင် သွေးပေါင်ပြန်တက်တဲ့ ဆေးတွေ (ဥပမာ-ဒိုပါမင်း)ကို ပေးရပါတယ်။ လက္ခဏာအနေနဲ့ လူနာက ရင်ဘတ်အောင့်တယ်၊ မောတယ်လို့ပြောပြီး သွေးပေါင်ထိုးကျသွားတတ်ပါတယ်။
(၃) နောက်တစ်မျိုးက Septicaemic Shockလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆီးချိုသမားတစ်ယောက်ဖျားတယ်။ အဲဒီအဖျားကို သေချာမကုရင် သွေးအဆိပ်တက်တဲ့ ရောဂါ (Septicaemia) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ရှော့ခ်ရသွားတတ်ပါတယ်။ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး ပေးရပါတယ်။ ပြီးတော့ ပိုးဝင်တဲ့နေရာကို ဖယ်ထုတ်ရပါတယ်။ ခြေထောက်မှာ အနာရှိရင် အနာကိုခွဲထုတ်၊ ပြည်တွေထုတ်. အဲဒီလို လုပ်ပေးရပါတယ်။
အထက်က အချက်တွေက ဆီးချိုသမားသွေးပေါင်ကျရတဲ့အပြင်းစားအချက်တွေပါ။ ဆီးချိုသမား သွေးပေါင်ကျတာချင်းတူပေမယ့် ကုသပုံက မတူပါဘူး။ ဆီးချိုသမား သွေးပေါင်ကျတဲ့အခါ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုပေးရပါတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေဖြစ်ရင် ဆေးရုံ/ဆေးခန်းကိုသွားပြီး ကုသသင့်ပါတယ်။
တချို့ကျတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ အရင်ပုံမှန်သွေးပေါင်က ၁၂၀/၈၀ လောက်ရှိခဲ့ပေမယ့် အခု ၁၀ဝ/၆၀လောက်ရှိသွားပါတယ်။ နေက အရမ်းပူလို့ ချွေးအထွက်များတယ်၊ အဲဒီအခါ ဓာတ်ဆားရည်သောက်လို့ရပါတယ်။ ဓာတ်ဆားရည်ထဲမှာ ဂလူးကို့စ်ပါပေမယ့် လောလောဆယ်မှာ ရေနဲ့ဓာတ်ဆားဆုံးရှုံးမှုကို ပြန်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတာကြောင့် ဓာတ်ဆားရည်ကို သောက်ပေးသင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆီးချိုထိန်းချုပ်မှုကောင်းတဲ့သူတွေက ဓာတ်ဆားရည်ကိုသောက်ပေးလို့ရပါတယ်။
မေး။ ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့သူ သွေးပေါင်ကျရင် ဘယ်လို နေထိုင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။ သွေးပေါင်ကျနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား မနေသင့်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် လှဲအိပ်နေပေးသင့်ပါတယ်။ မတ်တပ်ထရင် မိုက်ခနဲ လဲတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သွေးပေါင်ကျနေတဲ့အချိန် လှုပ်ရှားနေရင် အဆင်မပြေပါဘူး။ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီး လှဲအိပ်နေသင့်ပါတယ်။
Related Items:Blood Pressure, Diabetes, Drip, Healthy Life, Septicaemic Shock